Abenzi beNkqubo yokuziGcina abaSebenzi base China kunye nabathengisi | IVEN
AS / RS (Inkqubo yokuGcina ngokuGcina ngokuzenzekelayo)
Inkqubo yolawulo lwendawo yokugcina izinto (i-WMS) yisoftware kunye neenkqubo ezivumela imibutho ukuba ilawule kwaye ilawule imisebenzi yogcino ukusuka ngexesha iimpahla okanye izinto zingena kwindawo yokugcina izinto zide ziphume. Ukusebenza kwindawo yokugcina kugcina ulawulo, uluhlu lweenkqubo zokuchonga kunye nokuphicothwa kweencwadi.
Umzekelo, i-WMS inokubonelela ngokubonakala kuluhlu lombutho nangaliphi na ixesha kunye nendawo, nokuba kukwiziko okanye kuhambo. Inokulawula nokusebenza konikezelo lonikezelo ukusuka kumenzi okanye kwivenkile enkulu kugcino, emva koko kumthengisi okanye kwiziko lokuhambisa. I-WMS ihlala isetyenziswa ecaleni okanye idityaniswe nenkqubo yolawulo lwezothutho (TMS) okanye inkqubo yolawulo lwempahla.
-Nangona i-WMS inzima kwaye ibiza kakhulu ukuyiphumeza kwaye iyasebenza, imibutho ifumana izibonelelo ezinokuthi zithethelele ubunzima kunye neendleko.
Ukuphumeza i-WMS kunokunceda umbutho unciphise iindleko zabasebenzi, uphucule ukuchaneka kwempahla, uphucule ubhetyebhetye nokuphendula, unciphise iimpazamo ekukhetheni nasekuhambiseni iimpahla, kunye nokuphucula inkonzo yabathengi. Iinkqubo zangoku zokugcina ulawulo zisebenza ngedatha yexesha lokwenyani, ivumela umbutho ukuba ulawule olona lwazi lwanamhlanje kwimisebenzi efana neodolo, ukuthunyelwa, iirisithi kunye nokuhamba kwempahla.
Egqithileyo Isisombululo sokuPakisha eziMayeza kunye nezoNyango
Okulandelayo: Isiraphu yokuhlamba umatshini wokugcwalisa
Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina, Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led,